News Collection: रुवेलले पारसविरुद्ध जाहेरी दिन मानेनन्
रुवेलले पारसविरुद्ध जाहेरी दिन मानेनन्
केपी ढुंगाना, गोविन्द परियार- टाइगर टप्स फायरिङ प्रकरणमा पूर्वयुवराज पारस शाहविरुद्ध जाहेरी दिन र घटनास्थलमै बयान दिन इन्कार गरेर बंगलादेशी नागरिक रुवेल चौधरीले प्रहरी अनुसन्धानमा असहयोग गरेका छन्। पारसले शनिबार राति चितवनस्थित राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र टाइगर टप्स होटलमा गोली प्रहार गरेर आफ्नो ज्यान लिने प्रयास गरेको दाबी गरेका चौधरीले बुधबार काठमाडौं मन्डिखाटारस्थित ससुरालीघरमै प्रहरीलाई बयान दिएका छन्।
बयान लिन उनी रहेको मन्डिखाटारस्थित उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला निवास पुगेको प्रहरी वृत्त महाराजगन्जको टोलीले चौधरीलाई जाहेरीका लागि आग्रह गरेको थियो। पारसमाथि प्रहरीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको र पीडितको जाहेरी भए अनुसन्धान बलियो हुने भन्दै टोलीले उनलाई सम्झाएको थियो।
तर चौधरीले कानुनी परामर्शपछि मात्र यसबारे निर्णय लिने अडान लिए। 'अहिले जाहेरी दिने सोच छैन, कानुनी सल्लाहपछि निर्णय गरौंला,' चौधरीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख रमेश खरेलले अनुसन्धानमा पीडितको जाहेरी महŒवपूर्ण हुने जनाउँदै भने, 'जाहेरी नदिनु अनुसन्धानमा असहयोग गर्नु हो।'
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा प्रहरीकै उजुरीका आधारमा चितवन प्रहरीले पारसलाई पोखराको फूलबारी होटलबाट मंगलबार नियन्त्रणमा लिई भरतपुरस्थित तालिमकेन्द्र ल्याएको थियो।
घटनाबारे अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रालयद्वारा गठित डिआइजी गंगा पाण्डे संयोजक रहेको छानबिन समितिले चौधरीलाई बयानका लागि चितवन पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आग्रह गरेको थियो। समितिका तीनैजना सदस्य चितवनमा रहेको र घटनास्थलमै बयान लिन सहज हुने भन्दै समितिले चौधरीलाई चितवन बोलाए पनि उनी जान मानेनन्।
स्रोतका अनुसार प्रहरीप्रधान कार्यालयले चौधरीलाई चितवन लैजानेबारे गृहमन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो। गृहबाट 'माथिको आदेश' भन्दै उनलाई काठमाडौंमै बयान लिन प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन गरिएको थियो।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले चौधरीलाई नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर बयान लिने प्रयास विफल भएपछि प्रहरीटोली उनी बसिरहेको मन्डिखाटारस्थित सासू उपप्रधानमन्त्री एवं सुजाता कोइराला निवास जान बाध्य भएको थियो। त्यहीँ बयान लिएर प्रहरीले त्यसलाई वैधता दिन नजिकैको प्रभागमा चौधरीलाई बोलाएर हस्ताक्षर गराएको थियो।
सामान्यतया पीडितलाई प्रहरी कार्यालयमै बोलाएर जानकारी लिने प्रचलन छ। महिला, बालबालिका, शारीरिक रूपमा अस्वस्थ र सुरक्षा खतरा रहेका व्यक्तिको हकमा मात्र निवासमै बयान लिन सकिने एक प्रहरी अधिकृतले जनाए।
प्रहरीस्रोतका अनुसार शाहसँगको बयानबाट घटनाबारे चौधरीसँग समेत जानकारी लिनुपर्ने देखिएकाले छानबिन समितिले चौधरीलाई चितवन बोलाएको थियो। समितिको आग्रहविपरीत चौधरीको बयान काठमाडौंमै लिइएकोमा समितिका अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भने, 'उनी चितवनमा आएको भए अनुसन्धानमा धेरै सहयोग पुग्थ्यो, तर, हामीले भनेरमात्र नहुने रहेछ।'
मन्डिखाटारमा के-के भयो?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले बुधबार काठमाडौं परिसरलाई 'घटनाबारे बु‰नुपर्ने भएकाले चौधरीलाई चितवन प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराउन, वा त्यहीँको प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराएर बयान लिन वा नभेटिए नभेटिएको जानकारी दिन' आग्रह गर्दै पत्र पठाएको थियो।
काठमाडौं परिसरले चितवन प्रहरीको पत्रअनुसार बयान लिन महाराजगन्ज वृत्तलाई निर्देशन दिएपछि वृत्तप्रमुख दीपक थापाले उनको बयानको जिम्मा लिएका थिए।
प्रहरीले बयानका लागी प्रहरी कार्यालयमा आउन आग्रह गरेपछि चौधरी बस्दै आएको उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको मन्डिखाटारस्थित निवासमा बिहानैदेखि कांग्रेस नेताको आवतजावत बाक्लिएको थियो।
सबैभन्दा पहिले पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला कोइराला निवास पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार सिटौलाले चौधरी बयान दिन चितवन नजाने भन्दै घरमै प्रहरी पठाइदिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आग्रह गरेका थिए। पूर्वगृहमन्त्रीको आग्रहपछि प्रहरी मुख्यालयले चौधरीलाई घरमै बयान दिने सुविधा दिएको थियो।
सिटौलाले कस्तो बयान दिने भनेर चौधरीलाई आधा घन्टा 'ब्रिफिङ' गरेका थिए।
करिब साढे १० बजे चौधरीका वकिलद्वय मदन रेग्मी र राजेश्वर अधिकारी कोइराला निवास पुगेका थिए। त्यसको आधा घन्टापछि डिएसपी थापा बयान लिन पुगेका थिए।
त्यसलगत्तै वकिल, पूर्वगृहमन्त्री सिटौलासँगै बसेर चौधरीले प्रहरीलाई बयान दिएका थिए। कोइरालाकी सहयोगी सिर्जना अधिकारीले चौधरी र प्रहरीबीच दोभाषेको काम गरेकी थिइन्।
स्रोतका अनुसार रुवेलले बयानमा पारसले आफूलाई दुर्व्यवहार गर्दै आफू, श्रीमती र र छोरालाई मारिदिन्छु भनेको बयान दिएका छन्। हतियार देखाएर तर्साएका हुन्? भन्ने प्रहरीको प्रश्नमा उनले, 'आफूले बन्दुक नदेखेको' बयान दिएका छन्।
पारसले हवाइफायर गरेको बयान उनले दिए। चौधरीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'उनले मलाई गाली गर्दै मारिदिन्छु भने, मलाई डर लाग्यो, तेरो श्रीमती र छोरालाई पनि लाइनमा राखेर मारिदिन्छु भन्दै उग्र भएपछि मलाई होटलका कर्मचारी र पारसकै सुरक्षाकर्मीले जोगाएर कोठातिर लगे। त्यसपछि बन्दुक पड्केको आवाज सुनेको हुँ।'
दिउँसो ३ बजे बयान लिइसकेर प्रहरी टोली हिँडेपछिमात्र सिटौला मन्डिखाटारबाट बाहिरिएका थिए। स्रोतका अनुसार बयानलाई प्रहरी कार्यालयमा नेपालीकागजमा उतारेर साँझ पाँच बजे मन्डिखाटार प्रभागमा बोलाएर चौधरीको हस्ताक्षर लिइएको थियो।
स्रोतका अनुसार प्रहरीले निवासमा लिएको बयानलाई प्रहरी कार्यालयमा नेपालीकागजमा उतारेपछि बेलुका पाँच बजे मण्डीखाटार प्रभागमा बोलाएर प्रहरीले चौधरीलाई बयान कागजमा हस्ताक्षर गराएर चितवन पठाएको थियो।